दहीचिउरे राजनीतिले कोमल वलीलाई कता पुर्याउला ?
ARCHIVE, POLITICS » दहीचिउरे राजनीतिले कोमल वलीलाई कता पुर्याउला ?
जसरी नेपालमा बसाई सराई गर्ने क्रम बढ्दोछ त्यसरी नै राजनीतिमा पार्टी छोड्ने र अर्काे पार्टीमा लाग्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । लोकतान्त्रिक देशमा जसलाई जुन पार्टीमा जान मन लाग्छ जाने स्वतन्त्रता छ । पार्टी फेर्ने मात्रै नभएर पार्टीमा नै नबस्ने स्वतन्त्रता पनि उत्तिकै हुन्छ लोकतन्त्रमा ।
कलाकार र पत्रकारहरु पनि राजनीतिमा सक्रिय हुने त पुरानै चलन हो । पछिल्लो समय यो लहर झनै बढेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरु पनि चर्चा कमाएका सेलिब्रिटीहरुलाई आफ्नो पार्टीमा भित्र्याउन इच्छुक छन् ।
बिडम्वना के भने, रहरै रहरमा पार्टी प्रवेश गर्ने त्यस्ता सेलिब्रिटीहरु पार्टीभित्र म्युजियम र चिडियनखानाका जन्तु जस्तै बानेका छन् । तिनिहरु आफ्नै विवेकबाट चल्ने र राजनीतिक निर्णय गर्ने भन्दा पनि राजनीतिमा पनि सस्तो लोकप्रियता खोजिरहेका छन् । आम जनता र कार्यकर्ता पनि उनीहरुलाई पार्टीको नेता भन्दा पनि सेलिब्रिटीकै रुपमा देख्छन् ।
अहिले चर्चा त कलाकार तथा संचारकर्मी कोमल वलीको । राप्रपा नेपालबाट सुरु भएको उनको औपचारिक राजनीतिक यात्रा अब एमालेसम्म पुग्यो । एमालेका नेताहरुसँग सांसद पद चाहिने ‘बार्गेनिङ’ गरी पार्टी प्रवेश गर्न लागेको कुरा पनि बुझिएको छ ।
२ दशक बढी लामो सरकारी जागिर छोड्दै राप्रपा प्रवेश गर्दा कोमल वलीलाई बैचारिक आस्थाको आधारमा पार्टी रोजेको गुन्जायश थियो । तर राप्रपा फुटेपछि कमल थापा र पशुपति शमशेर राणा दुवै एक्लाएक्लै कमजोर नेताको रुपमा चिनिए । कोमल वली भने असुरक्षित महसुश गरिन् ।
त्यही असुरक्षाबाट मुक्त भएर सुरक्षित स्थानको खोजमिा उनी एमालेमा पुगिन् । यसले पनि प्रमाणित गर्छ कि, कोमल वली राजनीतिक आस्थाको आधारमा भन्दा पनि फेरि पनि चर्चाकै लागि राजनीतिमा छिन् ।
जुनसुकै पार्टीको ऐतिहासिक पृष्ठभुमि हेर्ने हो भने चर्चा र सस्तो लोकप्रियता भन्दा पनि सामाजिक उत्तरदायित्व बोध बढी देखिन्छ र देखिनुपर्छ । राणा शासन देखि पन्चायत काल हुँदै ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा पनि राजनीति गर्नेहरु चर्चाको लागि ध्यान दिएनन् । बरु उनीहरु आफू मरेरै पनि देशको परिवर्तन होस्, स्वतन्त्रता आओस् भन्नेमै केन्द्रित थिए । कोमल वलीले पक्कै इतिहास हेरेको हुनुपर्छ । यदी छैन भने साहना प्रधान र सैलजा आचार्यहरुको राजनीतिक संघर्ष पढ्नुस् । केही थाहा हुनेछ राजनीति के हो । राजनीतिक आस्था र बिचार के हो ?
तपाईँको पार्टी परिवर्तन गर्ने अधिकारप्रति केही भन्नु छैन, तर पार्टी फेर्ने शैली हेर्दा लाग्छ, सरासर पदलोलुपता नै हो । सांसद बनाउने शर्त राख्दै कोही कुनै पार्टीमा जान्छ भने त्यो घोर अनैतिक र बेइमानी हो । कोमल वलीले जतिसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि उनको पछिल्लो राजनीतिक दहीचिउरे प्रबृत्तिले राजनीतिक उचाइ बढाउँदैन घटाउँछ मात्रै ।
त्यसो त, कोमल दिदीले सक्रिय राजनति गर्न थालेको धेरै भएको छैन । सत्ताको केही स्वाद चाखे पनि प्रत्यक्ष सत्ता चलाउने तहमा पुग्नुभएको छैन । तपाईँ र तपाईँका अधिकांश फ्यानलाई त तपाईँ सांसद वा मन्त्री बनेको देख्ने इच्छा होला । तर मलाई त लाग्छ, पिँधबिनाको लोटा जस्तै तपाईँको राजनीतिले तपाईँलाई मन्त्री बनाए पनि राजनीतिक इमान दिनेछैन ।
तपाईँ जागिर खाने बेला नेपाली कांग्रेससँग निकट हुनुहुन्थ्यो । राप्रपाको माहोल बढेको बेला जागिर छोडी राप्रपामा प्रवेश गर्नुभयो । राप्रपा फुटेपछि सांसद बन्ने शर्त राख्दै एमालेमा पुग्नुभयो । पछि एमाले पनि कमजोर होला वा चुनावमा पराजित होला त्यसपछि कुन पार्टीमा जाने कोमल दिदी ? यसैले पनि दहिचिउरे शैली त्याग्नुस्, राजनीतिमा इमान खोज्नुस् । - नेपाली पत्र